हेल्लो ! के छ गाउँको खबर ? कतै दूध बिकेन, गाउँको कीर्तन रोकियो
विराटनगर, १३ चैत । सुखमा शहर र संटकमा गाउँ रोज्ने नेपालीको पुरानै शैली हो । कोरोना संक्रमणको त्रास बढेपछि बजारमा बसोबास गर्दै आएका धेरै मासिन गाउँ पुगेका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण गाउँ पुगेकाहरुलाई मंगलबारबाट लागू लकडाउनले प्रभावित बनाएको छ ।
‘यहाँ त दूध बिक्नै छोड्यो ।’ झापा गौरीगञ्ज गाउँपालिका–६ चादनी टोलकी राधा घिमिरे भन्छिन्, ‘कोरोना भाइरसको त्रास पनि छ ।’ उनी गाउँमा लकडाउनपछि कोरोना संक्रमणको त्रास झन धेरै बढेको बताउँछिन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्राससम्बन्धी फैलिएका अफवाहरूले गाउँ धेरै त्रसित बनेको छ । ‘दुई दिन बन्द गरेर गाउँमा दूध संकलन सुरु गर्याैं,’ मोरङ कानेपोखरी–२ मा डेरी सञ्चालन गर्दै आएका राजकुमार खनाल भन्छन्, ‘किसानले गाली गरेपछि सावधानी अपनाएर दूध संकलन गर्दैछौं ।’
खनाल गाउँमा दूध संकलन गरी विराटनगर, इटहरी र धरानसम्म पु¥याउँछन् । संक्रमणको जोखिम बढेपछि डेरीका काममा सतर्कता अपनाइएको उनले बताए । कोरोनाका कारण मोरङ नेताचोकका स्थानीय पनि प्रभावित छन् । राज्यले लकडाउन गरेपनि केही मानिस भेला भएर भजन कीर्तन गर्थे । तर बुधबारबाट प्रहरीले धेरै मान्छे भेला भएको बताउँदै कीर्तन गर्न रोक लगाएको छ ।
मोरङ बुढीगँगा गाउँपालिका–१ मा भने स्थानीय नेता आफ्ना कार्यकर्तालाई टेलिफोनमार्फत कोरोना भाइरसका बारेमा सचेतना जगाउँदैछन् । लकडाउनअघि घर–घर पुगेर कोरोना भाइरस बारे जानकारी गराएका दलका नेताहरू लकडाउनपछि मोबाइलबाटै जानकारी गराउन थालेको नेकपा नेता उपेन्द्र राय बताउँछन् ।
मोरङको कानेपोखरीमा भने कोरोनाका शंकास्पद बिरामी खोज्न स्थानीय सरकार लागि परेको छ । स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली कानेपोखरी गाउँपालिका–१ मा पुग्दा शंकास्पद व्यक्ति नै भागेका छन् ।
गाउँपालिकामा रहेका अन्य शंकास्पदलाई भने होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले बताए ।